Mpamokatra sy mpamatsy Magnet miloko | paravodilanitra
Magnetan'ny Hook miloko
Kitapo manjono andriamby
Andriamby SmCo kilasy 35
Andriamby manjono roa sosona
Ny andriamby fitaratra miloko, fariby Neodymium miloko maitso na andriamby fitaratra miloko isan-karazany dia ampiasaina hanantonana, hanavahana ary hahafantarana mora ireo zavatra.
Ny andriamby faribolana miloko dia asongadin'ny fiovan'ny lokon'ny loko Neodymium hook ankapobeny. Ity fanovana endrika tsotra ity dia manitatra ny fampiharana bebe kokoa. Ny farango dia azo esorina mora foana na hivoaka amin'ny andriamby boribory. Ity firafitra tsotra ity dia ahafahan'ny mpampiasa manova ny karazana hook amin'ny takian'izy ireo manokana. Ny kaopy vy avy amin'ny faribolan'ny andriamby Neodymium maro loko dia mampifantoka ny herin'ny andriamby ary mitondra azy mankany amin'ny tampon'ny fifandraisana mba hahafahan'ny andriamby kely habe hiteraka hery mitazona mahery. Manome fahaizana be dia be izy ireo amin'ny fitazonana entana isan-karazany toy ny tady, tariby, tariby na akanjo amin'ny faritra maro, toy ny trano fanatobiana entana, birao, efitrano fianarana, toeram-piasana, lakozia, sns.
Maninona no misafidy andriamby famolahana miloko
1. Loko isan-karazany misy: fotsy, mainty, maintso, manga, mena, volomparasy sy volamena. Azonao atao ny misafidy ny loko tianao indrindra, na milaza aminay izay loko vaovao mety ilainao. Ary avy eo izy ireo dia azo afangaro anaty andiana volon-koditra takiana aminao.
2 .Mora ampiasaina: ny andriamby Neodymium sy ny firafitry ny vilany vy dia miteraka hery manintona mahery ary avy eo ny habeny kely sy matevina amin'ny andriamby hook dia mety mifanaraka amin'ny fahaizanao mitazona. Mora entina sy esorina izy io, ary azonao ampiasaina ny farango na aiza na aiza misy vy na vy na ahantona ao anaty na ivelany.
3. Fisehoana tonga lafatra: malefaka sy mamirapiratra ny fisehon'ny vatan'ny andriamby sy ny boribory.
4. Haben'ny fenitra amin'ny tahiry ary azo alefa avy hatrany
Data ara-teknika ho an'ny andriamby hook miloko
Fizarana isa D M H h Hery Lanja afa-karatsaka Temperature miasa indrindra
MG MG MG MG kg lbs g ° C ° F
Teo aloha: Magnet Pot miaraka amin'ny kofehy anatiny
Manaraka: Magnet Hook miaraka amin'ny Bolt Eye
Andriamby vilany mahitsizoro
Neodymium Channel ...
Trondro misy lafiny roa ...
Trondro mitokana ...
Andriamby Pot miaraka amin'ny I ...
Andriamby Pot miaraka amin'ny B ...